Dagaalka Ganacsi Ee Mareykanka Iyo Shiinaha Iyo Sida Uu U Saamaynayo Ganacsiga Soomaaliya | Sanaagmedia — Warar Sugan
Dagaalka Ganacsi Ee Mareykanka Iyo Shiinaha Iyo Sida Uu U Saamaynayo Ganacsiga Soomaaliya
August 6, 2019 - Written by admin
“Dagaal oo dhan waa dagaal dhaqaale” sida dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha (waa Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Shiinaha).
Waxay la noqotay Madaxweyne Donald Trump in ay dalkiisa ku tahay cadaalad darro ganacsiga u dhaxeeya Ameerika iyo Shiinaha
Dalka Shiinaha ayaa sannadkii 2018 dalka Mareynkanka u dhoofiyay badeeca kala duwan oo guud ahaan qiimahoodu yahay $539.50 billion, Ameerikana waxay u dhoofisay dalka Shiinaha badeeca dhan $120.30 billion.
Madaxweyne Trump ayaa qaatay go’aan ah in la dul saaro badeecada laga keeno Shiinaha canshuur dhan 25% sanadkii 2017 (iyo 10% kale todobaadkan) si ay u yareeyaan farqiga ganacsi ($419.20 billion) ee u dhaxeeya labda dal ama si la isugu dheelli tiro ganacsiga Ameerika iyo Shiinaha iyo in lagu qasbo dalka Shiinaha in uu kordhiyo soo iibsashada badeecada dalka Ameerika.
Si la mid ah tallaabada uu qaaday dalka Mareykanka, ayaa dalka Shiinuhuna canshuur dul saaray badeecada uga timaada Ameerika.
Canshuurti la saaray badeecadaha labada dal waxay keentay in guud ahaan ganacsiga u dhaxeeya labada dal uu hoos u dhaco inkasta oo dhibku ku badan yahay dalka Shiinaha.
Si dadban ayay uga faa’iideen ganacsatada Soomaalidu dagaalka dhaqaale ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha.
Canshuurta Ameerika waxay qaali ka dhigtay badeecada uu Shiinuhu u dhoofiyo dalkaas. Si loo dhimo waxyeelada canshuurta, dalku Shiinuhu wuxuu hoos u dhigay sarrifka lacagtooda.
Shan sano ka hor (Agoosto 4, 2014), sarrifka halki Doolar (USD/CNY) wuxuu ahaa 6.18 Yuwaan (RMB). Hadda halkii Doolar waa 6.94 Yuwaan.
Taas waxay tilmaamaysaa in qiimaha Yuwaanku (CNY) uu hoos u dhacday 12.30% shan sano gudaheed
Dakhliga ganacsatada Soomaaliya waa Doolar; waxayna wax uga soo gataan Shiinaha Yuwaan (Yuan Renminbi). Haddii uusan isbadelin qiimaha badeecadu, ganacsatadeenu waa ka faa’iidayaan markasta oo sarifka Yuwaanku uu hoos u dhaco.
Dhinaca kale, dowladda Shiinaha ayaa xoogga saartay sidii ay suuqyo cusub ugu heli lahayd badeecadaha kala duwan oo ay dhoofiso si ay u yareyso waxyeelada dhaqaale ee ka soo gaari doonta dagaalka ganacsi ee kala dhaxeeya Mareykanka.
Sidaas awgeed, Dowladda Shiinaha ayaa u fududeeysay ganacsatada Soomaaliya helitaanka ogolaashaha dal ku galka (Entry Visa) ee dalka Shiinaha.
Baaq Furan oo ku Socda Ganacsatada Soomaaliyeed
Waxaan ugu baaqaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay qiima dhimis u sameeyaan dadweynaha Soomaaliyeed ee wax ka iibsada.
Dakhliga ganacsatadeenu waa Doolar waxayna wax ku soo gataan lacag fudud. Lacagaha dalalka ay badeecada ka soo gataan waa dhaceen oo raqiis ayay ku soo heleen badeecada.
Badeecada taala suuqyada Soomaaliya badankeed waxaa si toosa ama dadban looga keenaa dalalka Shiinaha, Turkiga, iyo Hindiya.
Sarifka Yuwaanka Shiinaha (USD/CNY), Liiraha Turkiga (USD/TRY) iyo Rubiiga Hindiya (USD/INR) hoos ayay u dhaceen shantii sano ee la soo dhaafay. Liiraha Turkiga wuxuu hoos u dhacay 159.26%; Rubiiga Hindiyana wuxuu hoos u dhacay 9.22%; Yuwaanka Shiinahana 12.30%.
Inkasta oo dowladdu bilowday in ay ganacsatada badeecadaha qaarkood ka qaado 5% canshuurta iibka (5% Sales Tax), ganacsade aan la sheekeystay wuxuu ii sheegay in mushaarka la siiyo shaqaalaha dukaamada, bakhaarada, iyo xafiisyada ganacsatada Soomaaliyeed aysan kordhin ama waxyar ku kordheen shantii sano ee la soo dhaafay.
Waa run in uu ijaarka goobaha ganacsigu uu kordhay laakin ijaarku waa “fixed cost” oo markii ganacsigu kordho ama wax soo saarku iyo iibku bato waxaa hoos u dhacaa “average fixed cost per unit” ka.
Marka waa caqligal dalabka ah in ganacsatadu ay siiyaan qiima dhimis macaamiishooda.
Ganacsiga Soomaaliya waa suuq furan. Haddii nabad la helo, waxaa soo geli doona ganacsiga gudaha shirkado ajnabi ah oo leefi doona ama suuqa ka saari doona shirkadaha dalka (bal u fiirso waxa ka dhacay ganacsigii duulimaadyada, howshii Xajka iyo dhismaha daaraha waa weyn).
Waxaa muuqata in ganacsi badan ay la wareegi doonaan shirkado ajnabi ah shanta sano ee soo socota.
Sidaas awgeed, waxaan markale ugu baaqaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay sameeyaan qiima dhimis iyo in ay kordhiyaan, hagaajiyaan adeegga ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyo tayada badeecada ay keenaan.
Waa muhiim in ganacsatadu la yeelato macaamiishooda xiriir wanaagsan (good customer relationship) si ay daacad ugu noqdaan ( customer loyalty) oo u xajistaan macaamiisha (customer retention).
Waxaa qoray Ustaad Ismail Ali Siad
University of Somalia (UNISO)